All Categories - VERTEX ANIMATION STUDIO
Video Lessons Course
Blender General Course
Blender Sculpting Course
Blender General Group
Blender Sculpting Group
Updates and Free video tutorials
Vertex Animation Studio မှ လုပ်နေ‌‌သော project
များ၊ သင်တန်းများ၊ 3D general knowledge, free
video tutorial များကို တင်ပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Blender General Course Module 01
Lecturer: U Thura Thein TIn.
Blender 3.1 New features
Blender 3.1 မှာ ပါတဲ့ New features တွေကို မြန်မာလို ရှင်းပြထားပါတယ်။
1. performance and speed ( GPU subdivision )
2.Mac os metal support only 12.3 0s
3.asset browser --> can import node group and more quicker.
4. Many new nodes in Geometry node editor
5. Context aware search menu
6.Copy global transform
7.fast obj and fbx export
Creating Forest in Blender
​ဒီ video tutorial မှာ Blender Geometry node ကို အသုံးပြုပြီး သစ်တောအုပ် တခု ပြုလုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
ပထမ Video မှာ Geometry node အကြောင်းကို Basic နားလည်အောင် ရှင်းပြထားပါတယ်။ Basic ကို သိပြီးမှ Forest ပြုလုပ်ပုံကို ဆက် လက် လေ့လာတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ယခု video တွေဟာ Free ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ အတွက် Project file တော့ မပါပါဘူး။ သင်တန်းသားများအတွက် ကတော့ အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ project file တွေပါပေးထားပါတယ်။
Earth Animation ( shading tutorial)
​ ယခု video tutorial မှာ ကမ္ဘာလုံး ကို Day နဲ့ Night animation ပြုလုပ် ပုံကို သင်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ tutorial ဟာ Blender ခုမှစသုံးဖူးတဲ့ သူတွေပါ လိုက် လုပ်ကြည့်လို့ ရတဲ့ Beginner level ဖြစ်ပါတယ်။
Blender 3.0 New Features
Blender version အသစ် 3.0 မှာ ပါလာမဲ့ New features များ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ video များဖြစ်ပါတယ်။
Video 1 -> About cycle X
Video2--> About Asset brwoser
Video3--> Pose library and Render
Vertex Animation Studio မှာ သင်တန်းတက်ထားသော ကျောင်းသားများ အနေနဲ့ Asset browser မှာ သုံးလို့ရတဲ့ Blender file များကို ဒီ link မှာ Dowload လုပ်ယူပါ။
Blender asset : Click here for Download
3D Character file for pose library test : Click here for download.
Blender မှာပါတဲ့ Boolean tools ကို အသုံးပြုပြီး modeling ပြုလုပ်နိုင် တဲ့ နည်းစနစ် တွေကို ပြပေးထားပါတယ်။ modeling ပြုလုပ်ရ လွယ်အောင် ဆရာ ဦးသူရသိန်းတင် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းစနစ်ဖြင့် သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ Video များ ကို အောက်မှာ ကြည့်နိင်ပါတယ်။
Vertex Animation Studio မှ သင်တန်းများတွင် အဆင့်မြင့် lessons များထည့်သွင်း သင်ကြားပေးပါတယ်။ ယခုပုံတွင် ပါသော model မှာ Blender တွင် Sculpting, painting, Render အစအဆုံး ပြုလုပ်ထားသော ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ များကို အစမှ အဆုံး အချောသတ် ပုံထွက် သည် အထိ video Lessons များ ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ သင်ခန်းစာ Video lessons များကို Sculpting သင်တန်း တက်ထားသူများ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
Blender နဲ့ Zbrush မှာ points အများဆုံး ဘယ်လောက် နဲ့ Sculpt လုပ်နိုင်လဲ?
Post ခေါင်းစဉ် အတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြည့်ထားတာပါ။ လက်တွေ့ မှာ Sculpting လုပ်ဖို့ point အများကြီး မလိုပါဘူး။ 10 million points ပတ်၀န်းကျင်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ ခုစမ်းသပ် ထားထာမှာတော့ Softwre နှစ်ခုလုံးက 85 million ထိ ရပါတယ်။
Blender Online သင်တန်း
Vertex Animation Studio မှ 3D Blender သင်တန်းများကို on-line မှ တိုက်ရိုက်သင်ကြား ပေး‌နေပါသည်။ သင်တန်းများကို Animation Project များကိုယ်တိုင် ပြုလုပ် နေသော ဆရာ ဦး သူရသိန်းတင် ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Toon shader in Blender.
Blender 3D animation ပြုလုပ်ပြီး toon shader နဲ့ Render ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။​
ဒီ video lessons များကို ဆရာ ဦးသူရသိန်းတင် ( Vertex Animation Studio ) က ပြုလုပ် ထားပါသည်။
Online Blender Course